Laba sarkaal oo lagu eedeynayo toogasha wiil skuuley ah oo xabsiga lagu sii hayn doono – The Voice of Northeastern Kenya
Laba sarkaal oo lagu eedeynayo toogasha wiil skuuley ah oo xabsiga lagu sii hayn doono
Maxkamada kutaalo Magaalada Mwingi ayaa amar ku bixisay in xabsiga lagu sii hayso laba askari oo ka tirsan ciidamada booliska kuwa maamulka ee loo yaqano AP-da kadib markii lagu soo eedeeyay in ay toogasha ku dileen wiil arday ahaa.
Sarkaaladan booliska oo ka howlgali jiray xerada AP-da ee galbeedka Kitui ayaa la xiray shalay galab oo khamiis ahayd markii mid kamid ah qof goob joog u ahaa uu warbixin kasoo qoray saldhiga booliska.
Ardaygaasi oo 16 sano jir aha oo lagu magacaabo Nicholas Munyoki Muthui ayaa la sheegay in uu dhiganayay skoolka hoose dhexe ee Kyaa Primary School.
County Kamishnaha bartamaha Mwingi David Rotich oo xaqiijiyay qabashada askartaasi ayaa intaa ku daray in xalay ay sexdeen saldhiga booliska Mwingi ka hor inta aan maanta loo soo qaadin maxkamada si dacwado dil ah loogu soo oogo.
Dacwad soo oogaha ayaa ka dalbaday Maxkamada in ragaasi xabsiga ay ku sii jireen muddo si loo soo dhameeyo baaritanada lagu hayo.
Labadan sarkaal oo magacyadooda lagu kala sheegay Abdi Mohammed Hassan oo 23 sano jir ah iyo James Benedict Oduor oo 25 sano jir ahaa ayaa falkaasi waxay kugesteen tuulada Kanginga oo katirsan Mwingi.
Xaakinka ay kasoo hormuqdeen eedeysanayaashan Kibet Sambu ayaa marki dambe amray in ragaasi xabsiga lagu sii hayo muddo shan cisho ah.
Xaakinka Maxkamada ayaa sheegay in marka uu soo dhamado baaritankaasi oo la ogaado ku luglahanshada falkaasi, kadib labadan sarkaal loo gudbin doono maxkamada Kitui si halkaasi loogu dhagesto dacwada ka dhanka ah.
Askartan ayaa la sheegay in ardaygaasi ay ka togteen labada gacmood waxuuna geeriyooday xilli xaaladiisa caafimad la gula tacaalayay isbitaalka Mwingi.
Wiilkan ayaa kasoo jeeday qoys iska dan yar waxa uuna habeenki qodi jiray carada halka maalintina uu aqriska aadayay.
← Kooxda Daacish oo la sheegay in ay gacanta ku dhigeen kumanaan shacab ah oo ka qaxayey nawaaxiga magaalada Mosul
Madaxweynaha dalka oo gaaray wadanka Ethipia →